Amisom oo ka hadashay weerar beeleedka lagu qaaday ciidamada Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Amisom oo ka hadashay weerar beeleedka lagu qaaday ciidamada Jabuuti
A warsame 19 October 2014 21 October 2014
Mareeg.com: Wakiilka Guddiga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Maman S. Sidikou ayaa sheegay inuu si aad ah uga xunyahay weerar iyo jid-gooyo saaka loo dhigay ciidamada AMISOM ee ka socda Jabuuti, kuwaasoo kusii jeediyey deegaanka Deefow oo 40 KM dhanka woqooyi kaga beegan Baledweyne.
Midowga Afrika ayaa sheegay in ciidamada AMISOM oo arrimo nabadeed u aaday deegaanka Deefow ay jidka u galeen rag hubeysan oo maleeshiyo ah, islamarkaana la gala horyimid debadbaxyo iyo jid-gooyooyin.
Sidoo kale, waxaa Midowga Afrika sheegay in ciidamadooda rasaasta lagula furay deegaanka Ceelgaal oo 10 KM dhanka woqooyi kaga began Baledweyne, ayna ku qasbanaadeen iney naftooda difaacaan.
“Waxaan aad uga xumahay inaan maqlo iska hor-imaad ka dhaca gobolka Hiiraan, waxaana codsanayaa in xaalka la dejiyo, lagana fogaado rabshado kale oo ka dhaca Deefow” ayuu yiri Ambassador Maman S. Sidikou.
Ambassador Sidikou ayaa meesha ka saaray in ciidamada AMISOM ay la safan yihiin qeyb ka mid ah dadka Soomaaliyeed, arrinkaas oo ay ku doodayaan maleeshiyaadka weerarka ku qaaday ciidamada Jabuuti.
“Waxaan rabaa inaan dadka Hiiraan iyo Soomaalida oo dhan u cadeeyo inaan AMISOM la jirin koox gaar ah, waxaa aan Soomaaliya u joognana tahay inaan u adeegno shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda si loo gaaro Nabad kama dambeys ah” ayuu sidoo kale yiri Sidikou.
Maleeshiyo beeleed iyo dad careysan ayaa maanta rabshado iyo dagaal kala hortegay ciidamada Jabuuti ee ku sugan Baledweyne, kuwaasoo doonayey iney gaaraan Tuulada Deefow oo ay horay u dagaalameen labo maleeshiyo beeleed.
Dalal reer galbeed ah oo ku baaqay joojinta colaadda Liibiya